Ukubalekela u-Olima Ukusuka eTarkov kugula 🥇 Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Olima Ukubaleka Tarkov kugula
Ukukopela kwethu kwe-Olima EFT kuhlala kufanelekile xa ufuna ukufumana impumelelo.
Fumana ukufikelela kwaye uthathe ezona zixhobo zibalaseleyo ze-EFT ngeenxa zonke-Thenga i-1-Day Product Key namhlanje!
Akukho sidingo sokusibuza ukuba kukho ezinye iindlela ezinde, siyaqonda-Thenga isitshixo seMveliso yeeveki ezi-1 namhlanje!
Ukufumana ukufikelela ixesha elide kwi-EFT yeHack yethu emangazayo-Thenga i-1-Inyanga yeMveliso ephambili namhlanje!
Uhlala uwine kangakanani kwimidlalo yokubaleka eTarkov? Ukuqhuba u-Raid ophumeleleyo akufuneki kube yinkqubo enzima, ngakumbi xa unezinto ozithandayo ze-Olima EFT Hack yokuxhomekeka. Ukukopela kwi-GamePron!
Ukubaleka Tarkov Olima kugula Information
Ukubaleka eTarkov kwenzelwe ukukuphosa kulomsindo xa kunokwenzeka, okanye ubuncinci kungabonakala njalo. Ungasebenzisa i-EFT Hack yethu ukusebenzisa yonke imeko ozifumana ikuyo, ke nokuba kungomnye umntu okanye ulishumi elinambini, uya kuhlala uyi "alpha". Akukho mntu udlala rhoqo onokukuyekisa! I-EFT Olima Hack isebenza kwiscreen esigcweleyo kwaye ingaphakathi, ikwayindlela elula yokubaleka eTarkov Hack onokuyifumana ngokubhekisele kufakelo kunye nokusetyenziswa. Impumelelo engakumbi kwi-EFT isondele kakhulu!
Ukubaleka kwethu kwi-Tarkov Olima ye-Hack ye-Enemy kunye ne-Item ESP, ekuvumela ukuba ubone phantse nantoni na (kubandakanya neentshaba kunye nezixhobo eziluncedo) kwiindawo eziqinileyo / ezi-opaque. I-EFT Aimbot ixhotyiswe nge-Adimable Aim FOV kunye ne-Bone Prioritization, kunye ne-Defined Aim Keys (nangaphezulu!).
Utshaba lwe-ESP (uMdlali / iNPC, umgama, amagama, iibhokisi, ukonakala komntu ngamnye (ukutshintsha kombala xa wonakele), iiCorpses, iiBhari zezeMpilo, ichaphaza leNtloko, amanqaku okuphuma
Into ye-ESP (umgama, amaxabiso amaxabiso anokuqwalaselwa (bonisa izinto ngamaxabiso aphezulu ngokwezicwangciso), izinto zoMnqophiso
Izitshixo zeenjongo ezichaziweyo
Susa umda wobunzima
Vula iiMinyango / iibhokisi / amatyala
Malunga nokubaleka eTarkov Olima
Sebenzisa i-EFT Cheat elungileyo iya kukuguqula ube ngumdlali okwinqanaba lobungcali ubusuku bonke, kwaye ngelixa ingeyiyo "esemthethweni", impumelelo ozoyifumana ngokuqinisekileyo! Ukubaleka e-Tarkov kunemishini emininzi enzima evuza ezinye zezona zinto ziphambili ezikhoyo kumdlalo, yiyo loo nto kunzima kakhulu-ukusebenzisa i-Escape yethu kwi-Tarkov Hack kuguqula ezo zinto zingabinanto ngaphandle kokuziqhelanisa, njengoko i-EFT Aimbot yethu ingayi umbekele phantsi. Bhangqa ukuba kunye ne-EFT Wallhack kwaye awusoze umangaliswe yi-AI eyoyikekayo okanye umdlali wokwenyani! Kukho izinto ezongezelelekileyo ezinje ngeSantya esiKhawulezayo kunye ne-Infinite Stamina, nazo.
Kutheni usebenzisa i-Escape from Tarkov Olima ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Uhlala ufuna ukuqala ngonyawo lwasekunene kwihlabathi lokugenca, yiyo loo nto ukusebenzisa isixhobo esifunwayo kusenza kakuhle. Awunakukhathazeka malunga nomngcipheko wokuvalwa, kuba zonke izixhobo ezikhoyo apha kwiGamepron azibonakali- ukuba nje ulumkile malunga neendlela zakho zokugenca, awusoze wavalwa! Asinakuze sibandakanye umxholo onesithunzi okanye onobungozi kwii-hacks zethu ngokunjalo, kusenza sibe ngomnye wabaphuhlisi abadumileyo kwi-intanethi ngoku! Nokuba ngumgangatho okanye ukhuseleko olifunayo, i-EFT Hack yethu inazo zombini.
Ukunqongophala kwemenyu yomdlalo weqonga efumaneka kwiindawo ezininzi zokubaleka eTarkov Hacks kuyadandathekisa, ukutsho nje okuncinci. Xa ufuna ukuziqhelanisa neemeko ezithile ngelixa udlala kwaye awunayo imenyu yomdlalo wokwenza njalo, yintoni enye ekufuneka yenziwe? Kuphela zii-hacks ezikumgangatho omncinci ezinokwala ukubandakanya imenyu yomdlalo, kunye nezinye ze "HF ezikumgangatho ophezulu" ozifumanayo kwi-Intanethi zisenemixokelelwano yemenyu yemidlalo. Ungatshintsha nantoni na oyifunayo usebenzisa imenyu yethu yomdlalo, zonke zingenziwa ngaphandle kokuvala umdlalo. Xa ixesha libaluleke kakhulu, i-Gamepron iza!
A6. Ewe, le cheat isebenza kwiscreen esigcweleyo
Hlala ukhuselwe ngokusebenzisa cheats zethu ezingafunyanwa. Xa uneakhawunti ungathanda ukuhlala ujikeleze okwethutyana, ukusebenzisa ii-cheats zethu kuhlala kuyinto ephambili. Hlala isilumko nge GamePron!
Thenga isitshixo semveliso kwi-Olima EFT yethu namhlanje kwaye uqalise ulawulo lwakho lolawulo.
Ilindelwe Lawula yethu Escape evela Tarkov Olima kugula?